कसरी निष्क्रिय गर्न B787 मा - ध्वनि - सतर्कता?
प्रश्न कसरी निष्क्रिय गर्न B787 मा - ध्वनि - सतर्कता?
1 वर्ष 11 महिना पहिले - 1 वर्ष 11 महिना पहिले #475 by FlyingFranz
म सिर्फ Ricoooo देखि B787 Dreamliner डाउनलोड र यो स्थापित।
तथापि, उडान गर्दा, यो चेतावनी ठूलो स्वरमा को ककपिट मा आवाज।
जहाँ यसलाई निष्क्रिय गर्न म फेला पार्न सकेन।
म अन्य एअर यो समस्या छैन। तिनीहरूले केवल स्क्रिनमा सतर्कता प्रदर्शन (तल्लो दायाँ।)
कुनै पनि मद्दत गर्नुहोस्।
अन्तिम सम्पादन: 1 वर्ष 11 महिना पहिले FlyingFranz.
1 वर्ष 11 महिना पहिले #476 by Gh0stRider203
म व्यक्तिगत तिनीहरूलाई सहयोगी फेला पार्न, तर प्रत्येक आफ्नै गर्न, एह?
त्यसपछि फेरि, त्यहाँ म "Bitching बेट्टी" को ठीक रुचाउनु छैन पटक हो lol
गाह्रो छैन। भर्खरै विशेष विमान लागि ध्वनि फोल्डर जानुहोस्, र विद्यमान फाइलनाम परिवर्तन, कि विमान लागि sound.cfg फाइल सम्पादन गर्न "फाइलनाम = मौन"
कि, समाधान गर्नुपर्छ यो मलाई लाग्छ ... lol मैले पहिले प्रयास कहिल्यै गर्नुभएको रूपमा कि मलाई उद्धृत छैन।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: FlyingFranz
1 वर्ष 11 महिना पहिले #477 by FlyingFranz
द्रुत प्रतिक्रियाको लागि धन्यबाद।
म कोशिश गरेका छौं ... कुनै राम्रो!
कुनै अध्याय यस विशेष विमान लागि sound.cfg फाइल मा "ध्वनि अलर्ट" छ।
जे भए पनि धन्यवाद। म अन्य यस्तै फाइलहरू यो sound.cfg फाइल तुलना गरेर फेरि प्रयास गर्नेछौं।
1 वर्ष 11 महिना पहिले #478 by Gh0stRider203
म वास्तवमा यो मेरो व्यक्तिगत राय मा, VA मा भएको लायक छैन भन्ने सरल वास्तवमा लागि 787 उड छैन। मलाई लागि, यो सबै पैसा बनाउने बारेमा, र 787 को 772LR (हामी छन् जो) जस्तै सीमा नजिक हुन सक्छ, यो तपाईं यो स्क्रिनसट मा देख्नुहुने रूपमा यात्रुहरू एउटै नम्बर बोक्न सक्दैन .. .जो को VA लागि कम $ हो।
1 वर्ष 11 महिना पहिले #498 by Tonny0909
बस simobjects / हवाईजहाज / planename / ध्वनि ती wav- फाइलहरू फेला पार्न र ती मेटाउन। उदाहरणका "callout100.wav" को लागि आदि
1 वर्ष 11 महिना पहिले #499 by FlyingFranz
तर, यो कष्टप्रद छ कि नै गरेर ध्वनि, तर यो यस विशेष विमान मा निष्क्रिय गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई छैन। म FSX अन्तर्गत अन्य एअर समस्या छैन।
को B787 फाइलहरू, त्यहाँ यी चेतावनी ध्वनि लागि भनिएको एउटा कोड हो। उदाहरणका लागि, वंश अलिकति मात्र पनि ठाडो छ भने, यो चेतावनी पनि यदि दर सही छ सुनिन्छ किनभने यो भन्दा अप्ठ्यारो छ।
म के गर्न सक्छ सबै मुख्य मा सम्बन्धित फाइलहरू मा ध्वनि स्तर कम थियो फोल्डर "ध्वनि" (10000 देखि 6000 तल।)
5 महिना3सप्ताह पहिले #1211 by FlankerArRicoo
विमानमा.cfg [gpws] प्रयोग गर्नुहोस्
यदि कुनै [GPWS] खण्ड हो भने केवल एउटा सिर्जना गर्नुहोस्।
यस खण्डले भू-नजिकैको चेतावनी प्रणालीको विवरणहरू सार्छ।
max_warning_height तलको उचाई जसको चेतावनी एक सक्रिय छ।
sink_rate_fpm यदि विमानले वर्णको यो दर भन्दा बढि चेतावनी चेतावनी सक्रिय छ।
excessive_sink_rate_fpm यदि एक विमानले यो दर भन्दा बढीको औसत भन्दा बढी चेतावनी सक्रिय हुन्छ।
climbout_sink_rate_fpm यदि लोफ-ओफको अवधिमा विमान उडान सुरु हुन्छ, र यो प्रतिशतको दर बढ्यो, चेतावनी हो।
flap_and_gear_sink_rate_fpm यदि एउटा विमान ल्यान्डिंग छ, र फ्लप्स वा गियर विस्तार बिना मूलको यो दर भन्दा बढी छ,
एक चेतावनी सक्रिय छ।
; // यसले यसलाई 'सिंक नगर्नुहोस्', 'धेरै कम-फ्लप', आदि कल आउट आउट गर्छ
; // न्यायाधीश को र रोब Barendgret को धन्यवाद
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.206 सेकेन्ड